Imisa ayuu Garoomada ka maqnaan doonaa Luke Shaw? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Imisa ayuu Garoomada ka maqnaan doonaa Luke Shaw?
(11-9-2018) Sida ay baahiyeen warbaahino kala duwan oo ka soo baxda dalka England daafaca Manchester United ee Luke Shaw ayaa Garoomada ka maqnaan doona mudo kooban isaga oo seegi doona 2 Cayaarood oo ay Man United ay Cayaari doonto.
Luke Shaw oo uu soo gaaray dhaawac Madaxa ah intii ay Socotey Cayaartii dalkiisa looga badiyey 2-1 ayaa lasheegayaa in dhaqaatiirta Manchester United ay sheegeen in uu seegi doono labada Cayaarood ee ugu soo horeysa kadibna uu Garoomada ku soo laaban doono.
Daafacaan ayaa seegi doona kulamada Watford oo Sabtiga ay lacayaari doonaan iyo kulanka koobka Champions League ee ay qaabili doonaan Young Boys waxaana Ninkaan lasiin doonaa dhawaan Cayaaryahankii ugu fiicnaa Man United bishii lasoo dhaafay.